Extraordinary Nzukọ Holm Fiber | Holmbygden.se
Ihe na 30 January, 2016 site Holmbygden.se
Bo Lindroos, Keith Sahlin, Roland Hultman, Lars-Erik Persson, Ulf Wikholm na Stefan Edin na pụrụ iche osisi nzukọ Gimåfors.
Ndị ọzọ ụbọchị zutere Holm Fibers osisi na ihe pụrụ iche nzukọ. Ndị so 'ụtọ, ọ nwere ike kwuru na Nlekọta Board mgbe niile n'usoro iwu igbu oge ugbu a akpatre arụ ọrụ na Holm Fibers ngwa. Ebe ọ bụ na ọhụrụ iwu ndị na-abịa abịa afọ iche County Board mgbakwunye na ozi nke bụ ya mere na nzukọ.
Nke a oge, gbakọtara na district bredbandseldsjälar n'elu a iko kọfị na wheat ogologo nke oru ngo n'ụlọ Gimåfors Bygdegård. Oge ọzọ na osisi enịm ke na nsọtụ ọzọ nke Holmsjön, on “Hultman Rakan”. Work na eriri brọdband ka Holm ejikọ obodo ntà, ma n'ụzọ ihe atụ na nkịtị gburugburu Holmsjön.
E nwere ọtụtụ ihe afọ ofufo mgbalị mere ịgụ na ngalaba na ngwa iwu, chọta oru ngo, gbakọọ ego na-anakọta otu ụgwọ M.M.. N'ozuzu, ọ bụ nanị ihe karịrị 180 òtù nke compound, ma na-adịgide adịgide na n'ụlọ nwe.
Ọnọdụ taa bụ na Bynet anọchi imewe nke eriri ịbịaru, mgbe ntinye ikwe ọnụ dị maka nhọrọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ nke netwọk. Ọ na-anọgide na-ahọrọ na-ewu. Ihe niile si osisi, ma na mgbe Nlekọta Board na Board akpatre mma ngwa ma nye ego nkwado. Ọ na-ele anya na mma n'oge na mgbe Holm eriri gbakwunyere na rịọrọ ozi, nke mere na ndị bara arụ ọrụ nwere ike na-amalite na mmiri / okpomọkụ.
– Ọ bụrụ na ị adịghị akwụ ụgwọ na kwa afọ ego maka 2016 (na ọbụna ụfọdụ na- 2015), na-eme otú agafe!
Lezienụ kwa afọ ego 100:- ruo BG 500-0229, dee ihe onwunwe designation na aha.
– Ị dị ka onye so gbanwere email, nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị? Nwee ume a.
– N'ihi na ndị gị bụ ndị na-adịghị ma-amara gị ọkwa na ihe onwunwe nke Holm Fiber bụ oge ime ya ugbu a, iji nweta a dị ọnụ ala karịa na ndenye aha ego tupu amalite egbe na-aga. Mụta ihe na aha ebe a.